Dolphin Emulator inomhanya kaviri nekukurumidza paApple Silicon | Ndinobva mac
Dolphin Emulator inomhanya kaviri nekukurumidza paApple Silicon
Kana iwe watotenga nyowani Apple siliconIwe unogona kunge usina kukoshesa chikara chiripo zvakanyanya. Kana iwe uchiwanzoshanda nehofisi software, uye kusefa internet, haungamboone mutsauko uchienzaniswa neyako yekare Intel-based Mac.
Asi kana iwe ukashandisa "inorema" software inoda kumanikidza processor kusvika pakakwirira, unenge watobudikira kunze, sezviri kuitwa nevakagadziri vazhinji. Sezvazviri nema programmers eanozivikanwa emavhidhiyo mutambo emulator Dolphin emulator. Ivo vanofadzwa nekumhanyisa kwekuitwa kwesoftware yavo paM1.
Sezvo yekutanga Apple Silicon yakavhurwa mwedzi mishoma yapfuura, ivo vanogadzira iyo emulator Dolphin, ichiziva kugona kwayo, yanga ichishanda kugadzirisa software yayo kune Apple nyowani M1 processor, kuti ishande natively.
Zvinotaridza kuti vakatobudirira, uye mabhenji ekutanga avakaburitsa anoratidza kuti emulator inoshanda kaviri nekukurumidza natively paMac na M1 processor kupfuura yapfuura Intel-based Macs.
Miedzo yekutanga neApple Silicon yakaitwa neiyo isina kuvandudzwa Dolphin Emulator pasi peRosetta 2. Emulator mhedzisiro yacho yainakidza. Mazhinji emitambo akamhanya zvakanaka uye kuita kwese kwaive nani pane pane MacBook Pro 2018 ine Intel Core i7 processor.
Dolphin pane iyo Intel MacBook Pro inogona kumhanya Super Smash Bros pa 71 the, apo M1 Mac inomhanya mutambo mumwechete pa79fps pasi peRosetta 2. Mune mimwe mitambo yakaita seStar Wars Rogue Squadron II, musiyano wekuita wainyanya kuoneka: 16fps chete paIntel MacBook Pro vs. 49fps paM1 Mac ine Rosetta 2 .
Kutanga bvunzo nekuzvarwa kuurayiwa
Kuona kugona kweprosesa, ivo vari kunyora iyo Dolphin Emulator kumhanya natively pane M1. Miedzo yekutanga inoratidza kuti iwo iwo Super Smart Bros mutambo unomhanya pa 120 the. Utsinye. Aya ndiwo mabvunzo ekutanga, ayo anogona kuve akapurindwa zvakanyanya mukuita.
Zvinoenderana nemiedzo yavo, vanoona kuti mashandiro eiyo M1 processor ndeyechikara. Dolphin pane iyo M1, iwe unogona kupa 8,94 mafuremu ane watt imwe yemagetsi, nepo Intel MacBook Pro ichipa 1,38 mafuremu pa watt.
Panguva ino, iyo vhezheni vhezheni yeDolphin Emulator kunyorera kweM1 inongowanikwa chete seyekuvandudza vhezheni. Unogona kuwana rumwe ruzivo nezve bvunzo dzekutanga neDolphin Emulator muApple Silicon mune yayo Blog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Dolphin Emulator inomhanya kaviri nekukurumidza paApple Silicon
Iyo Apple Watch yakaramba ichitonga musika wewatchwatch muQ2021 XNUMX
Apple Inogovera Official Trailer yePamuviri paApple TV +